Shirka Arrimaha Dastuurka heer federaal iyo dowlad goboleed oo ka furmay magaalada Mogadishu… – Hagaag.com
Shirka Arrimaha Dastuurka heer federaal iyo dowlad goboleed oo ka furmay magaalada Mogadishu…
Shirka Agaasimayaasha Guud ee Wasaraadaha Arrimaha Dastuurka heer Federal iyo heer Dowlad Goboleed oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkaan oo socon doona muddo saddex maalin ah waxay ujeedadiisu tahay sidii loo sii dhaqaajin lahaa howlihii ka qabsoomay arrimaha farsmada ee dib u eegista dastuurka, iyo sidii loo xaqiijin lahaa kaydinta howlaha mugga iyo baaxadda leh ee laga qabtay dib-u-eegista dastuurka maadaama agaasimayaasha guud ay yhiin laf dhabarka hay’adaha.
Sidoo kale, shirka inta uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa nuqulka ugu dambeeya ee dib-u-eegista dastuurka, halka ay marayaan arrimaha u baahan wada xaajoodyada siyaasadeed, warbixinta ka sii ambaqaada shaqada laga soo qabtay dastuurka muddo xileedka baarlamaanka 10aad iyo u diyaargarowga iyo falanqaynta shirka lagu soo bandhigi doono casharada laga bartay intii ay socotay dib-u-eegista dastuurka.
“waa muhiim in aan dib loogu laaban howshii mugga lahayd ee laga soo qabtay dib-u-eegista dastuurka, juhdigii iyo waqtigii galay si uusan u noqon hal bacaad lagu lisay, waa in aan ka shaqeynaa sidii loo sii ambaqaadi lahaa arrimaha laga qabtay dib-u-eegista dastuurka” ayuu yiri agaasime Zubayr.
Sidoo kale, agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha dastuurka Koonfur galbeed, Galmudug iyo wakiilka Hirshabelle ayaa kalmado ka jediyay kulanka waxayna soo dhoweeyeen kulanka nuucaan oo kale ah iyagoo sheegay in ay xoojinayso xiriirka wada shaqayn ee u dhexeeya wasaaradaha dastuurka heer Federaal iyo heer dowlad goboleed.